Kitapo mena - famolavolana 2018 - lamaody amin'ny lamaody miaraka amin'ny volamena, mainty, loko, paiso, voninkazo, string, ombre, jirofo, lunar
Kitapo mena - famolavolana 2018 ho an'ny fantsika fohy sy lava ho an'ny fotoana rehetra
Vehivavy maro amin'ny lamaody hanampy tsipika marevaka tsy hay hadinoina ny taolam-paty marefo, ny endriky ny 2018 dia manavaka ny karazan-javatra miavaka. Mety ho monophonic izy ireo na ahitana karazana sary sy endriky ny endrika amam-bika.
Fanolorana mena midorehitra 2018 - lamaody lamaody
Ny Stylistes rehefa mamorona karazana fantsona mahomby dia mampiasa ny fantsika marefo, ny drafitra ny 2018 dia midika ny fampiasana karazana varotra isan-karazany. Azonao atao lisitra ireto manaraka ireto:
Azo ampiharina amin'ny takelaka fingotra fohy na manana lanjan'ny halavany, azo avao koa ny dikan-teny efa ela;
Misy karazana ombre maro samihafa izay hita ao anatin'ny loko mitovy, izay misy alokaloka iray hafa mihodina amin'ny hafa, na mampiasa tonony mifanohitra. Ohatra, ny endrika mena ho an'ny nails 2018 amin'ny mainty dia tena mahatalanjona;
Misy fomba fanao stylistic sasany rehefa manamboatra akanjom-behivavy frantsay, izany dia azo lazaina amin'ny fohy na, mifanohitra amin'izay, ny famirapiratana ambony. Ny fironana mitovy amin'izany dia mihatra amin'ny fananganana ny zavakanton'ny alikaola;
Mankasitraka ny fisehoan-tsavoka, paompy, bolongana volamena na volafotsy;
Ao anatin'ireo sary maromaro maromaro, voninkazo sy legioma, endrika marevaka sy geometrika, dia tena malaza ny endriky ny kofehin-dandy mahazatra, mety ho eo ihany koa ny dika mitovy amin'ny biby;
Fa ny gamut maitso, dia tena samihafa izy io, misy ihany koa mamirapiratra, manakaiky ny masomboly manankarena, ary ny jaky mena, ary ny loko manga.
Fanolorana mena midorehitra 2018 - endrika modely
Amin'ny fampiasana azy ho fanampin'ny endriky ny hodi-hena, ny endriky ny 2018 dia manolotra safidy solontenan'ireo zanga firaisana ara-nofo samihafa karazam-borona. Azo atao ny manamarika ny fironana hendrivotra toy izao:
Ny endrika oval klasika - dia manerantany ary ho lasa safidy fandresena amin'ny ankapobeny amin'ny fampiarahan'ny tsipìka andavanandro isan-andro sy mahavariana;
Ny endrik'olona mivelatra amin'ny rantsana madinidinika dia heverina ho fironana marina amin'ity vanim-potoana ity. Manana endrika mendri-piderana izy io ary miaraka amin'ny vehivavy sy ny fahantrany;
mofomamy manify mavo 2018 "kiraro maranitra" miezaka mifidy tanora tovovavy. Maniry ny hampitombo ny fisainana ary manamboatra tsipìka mahavaky fo. Ity safidy ity dia ho fanampiny fanampiny ho an'ny takariva iray na amin'ny fampakaram-bady.
Red manicure amin'ny famolavolana 2018
Mba hamoronana akanjo maoderina mpanao kanto dia ampiasao ny novolavolaina mena manamboatra 2018, izay ahafahanao manonona ireto manaraka ireto:
Ny fampiharana ny zavakanto floristic sy ny zavamaniry, izy ireo dia mitaky be amin'ny fotoan'ny lohataona sy ny fahavaratra;
Manicure dia sady be maitso ary maitso, azo atao koa ny mampifandray ireo karazana akanjo ireo;
Manana toerana manokana ny geometry, raha ny tsipiriany sy ny tarehimarika samihafa dia raisina: lohahevitra, andalana, rhombuses, efamira, triangles, boribory;
fanaovana sarin-javatra volamena sy volafotsy;
Ny famirapiratana dia hanome ny karazam-pandrefesana rehetra, sparkles ary vatokely;
Ny fomba tsotra hampidirana ny fahasamihafana dia ny fampiasana stickers.
Kitapo mena midorehitra 2018 miaraka amin'ny volamena
Ny tsipìka mahavariana dia hanampy amin'ny fananganana volombava volamena amin'ny 2018 miaraka amin'ny loko mena. Azo atao amin'ireto karazan-javatra manaraka ireto izany:
Ao amin'ny loko mena midorehitra dia azo ampiasaina ny loko malalaka na tery, izy ireo dia miseho amin'ny endrika lava sy lava, diagonal, miaraka amin'ny fanampian'izy ireo, azo atao ny manamboatra kitapom-batika na menaka;
Ny fanatsarana sy ny fanatsarana dia manome modely volamena, voasarika amin'ny endriky ny dantelina kely. Afaka manamboatra rantsana iray na maromaro na rehetra izy ireo;
Misy fomba toy izany toy ny kodiarana volamena manodidina ny tarehimarika geometry;
ny famolahana ny rantsantanana peratra amin'ny vovoka volamena dia niely patrana, nafenina ny takelaka manontolo;
Ny fantsika miloko mavo "volamena drafitra 2018" dia tonga lafatra ho an'ireo zazavavy manana kintana maizina, kestnut, loko mena ary tenda matevina .
Fanolorana mena midorehitra 2018 miaraka amin'ny volafotsy
Fomba mitovy amin'ny fisoratana anarana ihany koa dia manavaka amin'ny fampiasana ny firavaka volafotsy. Mety misy fantsika lava mena miditra «design 2018» na fohy mirakotra plastika voaravaka amin'ny singa volafotsy. Ilaina ny mandinika fa ny loko mitovy amin'izany dia asaina amin'ny blondes na brunettes ny loko "mangatsiaka", izay natolotry ny hoditra madio.
Kitapo mena midorehitra 2018 miaraka amin'ny voninkazo
Ny andro mialoha ny vanim-potoana mafana, ny endriky ny fanilo mareva-doko 2018, izay ahitana moty floristic, dia tena zava-dehibe. Manana toetra mampiavaka izany izy:
Ny voninkazo dia azo atao amin'ny loko isan-karazany ary manintona ny loko mena midorehitra;
Ny safidy hafa dia ny endriky ny voninkazo maitso marevaka eo amin'ny takelaka amin'ny alokaloka hafa, raha tsara kokoa raha toa izy io dia hosodoko amin'ny vatany tsy misy atin'ny na ny pastel;
Ornament floral afaka manamboatra tanana iray na maromaro;
Ny voninkazo dia mety ho kely na lehibe, miaraka amin'ny sampana, ravina ary singa fototra;
Ny fanontana mavokely mena tamin'ny 2018 dia ahitana ny sarin'ny loko izay azo tanterahina amin'ny fomba maro, ho tsotra na voluminous.
Fanolorana mena midorehitra 2018 miaraka amin'ny sparkles
Ny manikika manintona tena mahavariana misy loko mena 2018 dia azo atao bebe kokoa kokoa, raha mampihatra ny fanontana miaraka amin'ny sequins. Ny fananganana dia azo tanterahina amin'ny fiovàna toy izany:
miparitaka manerana ny tendron'ny fantsika amin'ny rantsan-tanana;
Ny glitter dia afaka mipetraka eo amin'ny tendron'ilay takelaka fantsika, mihetsika toy ny jiromotra voalohany;
Noho ny fanampian'ny tsipika dia azo atao ny mametraka ny tendrontany mitsangana na horita.
Fanala matevina amin'ny 2018 miaraka amin'ny lamina
Mba hamoronana fantsika miloko marefo, ny drafitra amin'ny 2018 dia ahafahana manamboatra karazana sary. Ny mahazatra sy malaza indrindra amin'izy ireo dia ahitana ireto manaraka ireto:
loha-voankazo, indrindra indrindra amin'ny fiatrehana ny vanin-taona mafana. Tafiditra ao anatin'izany ny manintona ny felany mena midorehitra na ny endriky ny lokon'ny loko hafa eo amin'ny tasy scarlet. Aza hadinoina ny fampiharana ny volon'ny volom-borona mamorona vokatra vaovao;
Ny sary famantarana geometrika dia heverina ho tena zava-doza amin'ity vanim-potoana ity, ka mety misy karazana sy singa maro isan-karazany, faribolana, efamira, rhombuses, triangles, tsipika mahitsy na zigzags, dots.
Fanolorana mavo tamin'ny 2018 frantsay
Amin'ny artailo nentim-paharazana, azonao atao ny mitondra zesty sy pikaniana raha mampiasa ny fanovozan-tsakazo frantsay 2018 ianao. Amin'ireo toetra mampiavaka azy, dia azonao atao ny manonona ireto manaraka ireto:
Ny moka dia ny tendron'ilay plateau na ny ampahany lehibe;
bala, manasaraka ny tendrony avy amin'ny ampahany lehibe;
Ny tendron-tsoroka dia afaka hiorina tanteraka amin'ny akorandriaka na paiso;
Ny tendrony dia azo aforitra amin'ny loko iray, ary mety ho iray na maromaro manasaraka ny loko hafa;
Ny famolavolan-jiro mena, ny drafy jirofo 2018 dia azo ampifandraisina amin'ny singa hafa amin'ny endriny, ohatra, ny ravin-damba dia mifototra amina sehatra, horizontaly na diagonaly.
Fanala matevina amin'ny 2018 ombre
Ny zava-baovao lamaody amin'ity vanim-potoana ity dia ny fanilo mareva-doko 2018. Mitranga izany amin'ny fiovàna toy izany:
Tadio sy tsikelikely ny alin'ny aloka iray hafa. Ohatra, azo ampiasaina ny tonony mavokely mena sy mavo;
Ny tena takiana dia ny fifindran'ny mena midorehitra amin'ny mainty, ireo loko ireo dia mifanaraka tsara. Afaka mampiasa karazana hafa ianao;
Stylista, mamorona hodi-kazo mena «design 2018», dia afaka manana gradient horizontally na vertika.
Kitapo mena midorehitra 2018 amin'ny rhinestone
Ny vahaolana handresy amin'ny alin'ny marainan'ny hariva dia ho toy ny kofehy vita amin'ny kofehy tsara tarehy 2018, voaravaka amin'ny akora am-paosy. Afaka mipetraka any amin'ny faritra toy izany izy ireo:
eo amin'ny tendron-tsoroka mba hametahana ny jaky na eo ambany, amin'ny endriky ny birao manasaraka azy;
Azo atao amin'ny fomba mitovy ny manikôlika volana;
Ny strasses dia afaka mametraka karazan-tsiranoka horita, vertika, diagonal, karazam-pamokarana;
Ny rhinestôma dia afaka manala tanteraka ny rantsan-tanana.
Tena manintona sy marefo manopy mena manamboatra 2018 ho an'ny fantsika lava fohy na tsilo lava lava, vita amin'ny maingoka. Afaka manao zavatra miaraka amin'ny glossy amin'ny fomba toy izany izy:
Ny varimbazaha dia afaka mifanakaiky amin'ny rantsana samihafa;
Ny glossy na ny maingoka dia afaka manintona karazana lamaody, ohatra, tady na curls.
Ny karazana manicure hafa malaza dia ny famolavolana mena ny fantsika amin'ny lava 2018. Ity singa ity dia azo atao amin'ny fomba toy izany:
mampiasa laka mazava na miloko;
Ny strasses dia afaka mamoaka tady manasaraka ny lavaka sy ny ampahany lehibe;
Ny endriky ny saka dia mety ho endrika fatoriana mahazatra na triangular.
Shellac amin'ny vato rongony
Sakafo mody 2018 - fironana vaovao, fironana, fanavaozana marevaka
Ny vokatry ny ombre amin'ny fantsika
Manicure hevitra ho an'ny Taombaovao
Sary fanangonana fahavaratra Dior 2016
Rongony ho an'ny fatiantoka
Ahoana ny hanomezany zaza iray isan-taona?
Sakafo ho an'ny salady fahazavana eo amin'ny latabatra fety
Norma ho an'ny zaza vao teraka
Bandana eo amin'ny lohany
Diôretika amin'ny loop
Silicone miora ho an'ny gypsum
Fampiharana fototra eo an-damosina
Sakafo môtô - lohataona amin'ny lohataona 2015
Zavamaniry voninkazo monochrome - loko fotsy!